Warshad Xidhiidhada Tuuboyinka | Shiinaha tuuboyinka isku xirayaasha iyo shirkado
Wadajirka Ballaarinta Birta & Gubashada
Maxay yihiin Wadajirka Ballaarinta? Kala-goysyada ballaarinta waxaa loo isticmaalaa nidaamyada dhuumaha si loo dhuuqo kuleylka ballaarinta kuleylka ama dhaqdhaqaaqa terminal halka isticmaalka wareegga ballaarinta uu yahay mid aan loo baahnayn ama aan macquul ahayn. Kala-goysyada fidinta waxaa lagu heli karaa qaabab iyo qalabyo badan oo kala duwan. Dhuun kasta oo isku xidha laba qodob waxa lagu qaadayaa noocyo badan oo ficil ah taas oo ka dhalanaysa culays saaran tuubada. Qaar ka mid ah sababaha walwalkaan waa cadaadiska Gudaha ama dibedda ee heerkulka shaqada. Miisaanka dhuumaha laftiisa iyo pa ...
Kala-goysyada Kala-baxa ayaa door muhiim ah ka ciyaara naqshadeynta iyo qaabeynta dhuumaha iyo wiishka. Iyagu waa gargaar lama huraan ah inta lagu jiro rakibidda iyo saarista qaybaha tuubbada iyo fallaaraha. Iyadoo aan lahayn kala furfuris wadajirka ah oo bixiya hagaajin joogto ah, waa wax aan macquul ahayn in si sax ah loo geliyo waalka qaybta tuubbada. Waad ku mahadsantahay hagaajintan isku-darka kala-goynta, waalka ayaa lagu dhejin karaa ag-marinta kala-baxa, iyo kala-goynta kala-goynta ayaa loo dejin karaa dhererka saxda ah ee loo baahan yahay mudnaanta ...
Ha ahaato dhismaha markabka, dhismaha adeegyada injineernimada, warshadaha saliida macdanta ama mashiinada, dhismaha warshad iyo tamarta - alaabada elastomer ee ay soo saarto shirkadayada waxay diirada saareysaa yareynta xiisadda, kala saarida buuqa iyo gariirka, dhuuqida balaarinta kuleylka ama dhismaha kaabayaasha iyo magdhawga khaladaadka xilliga rakibaadda. Waxaan u horumarineynaa alaabooyin kaladuwan oo codsiyo kala duwan ah. Iskuduwida Balaadhinta Rubber waa isku xira jilicsan oo laga sameeyay dabiici ama synthe ...
Birta Tubbada waxaa sidoo kale loo yaqaannaa biibiile isku xira dabacsan, waa qaybo muhiim u ah isku xirka mashruuca, iyadoo la isku darayo tuubbo jilicsan oo jiingado leh, shaati saafiya iyo isku-xir. Kala goysyada jilicsan ee birta ah waxaa loo isticmaalaa inay yihiin xubno magdhaw ah, walxaha xira, isku xidhka walxaha, iyo walxaha nuugista naxdinta ee nidaamyada kala duwan ee dareeraha iyo gaaska halkaasoo looga baahdo dhererka, heerkulka, booska iyo xaglaha magdhowga Iska yaree walbahaarka isku xirka tuubooyinka qalabka wareejinta ee xasaasiga ah su ...